मुटुरोगीलाई कोरोनाको जोखिम कति ? – Nepalpostkhabar
मुटुरोगीलाई कोरोनाको जोखिम कति ?
Hemant KC । २२ बैशाख २०७७, सोमबार ०६:३८ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले शरीरका विभिन्न संवदेनशील अंगमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विज्ञहरूले गम्भीर अध्ययन गर्न थालेका छन् । कोरोनाले मूलतः श्वास–प्रश्वासमा असर गर्छ । कोरोनाले मुटुमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दैन भन्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विज्ञहरूका अनुसार ‘स्पाइक प्रोटिन्स’ अर्थात् कोराना भाइरसको बाहिरी बनोटमा रहेका चुच्चा भागले मुटु र फोक्सोका कोषिकाले पैदा गर्ने ‘एनजिओटेनसिन कन्भर्टिङ इन्जाइम टु’लाई क्रियाशील हुन दिँदैन ।
कोरोना भाइरसले पैदा गर्ने ‘साइटोकिन्स’ रसायनले फोक्सोमा जति असर गर्छ, त्यति नै मुटु र मुटुका आर्टरीमा रोकावट ल्याउन तथा ‘हार्ट अट्याक’ गराउने सम्भावना पनि रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
मुटु र ‘ब्लडप्रेसर’लाई सन्तुलित र सक्रिय राख्नु नै ‘एनजिओटेनसिन कन्भर्टिङ इन्जाइम टु’को काम हो । यी ‘इन्जाइम’ निष्क्रिय भएसँगै कोरोना भाइरस मानव शरीरका कोषिकाभित्र छिर्छन् । तिनीहरूले शरीरभित्र कोषिका पैदा गर्ने प्रणालीमा अवरोध गरी भाइरसका कोषिका पैदा गर्न थाल्छन् ।
यससँगै भाइरसले ‘साइटोकिन्स’ नामक रसायन पैदा गर्छ । यो रसायनले संक्रमितको फोक्सोलाई काम गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ । जसले गर्दा फोक्सोले काम गर्न छोड्छ र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै जान्छ । अक्सिजनको कमी मुटुका लागि मात्र नभई पूरा शरीरकै लागि खतरनाक हुन्छ ।
शरीरमा अक्सिजनको कमीलाई सन्तुलनमा राख्न र शरीरका अंग–अंगमा रक्तसञ्चार गराउन मुटु तीव्र गतिमा धड्किन थाल्छ । लामो समयसम्म यही क्रम जारी रहे मुटु कमजोर हुन थाल्छ र ‘हार्ट फेलियर’ हुने सम्भावना बढ्न जान्छ ।
हालसम्म मुटुका बिरामीलाई कोरोनाको जोखिम नदेखिए पनि सजग रहनुपर्ने हृदयरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । यदि कोरोनाको प्रभाव मुटुमा पनि देखिएमा निदान कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
मुटुसम्बन्धी समस्या भएका गर्भवतीलाई अझ खतरा हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । मुटुका भल्भ र मांशपेसीमा समस्या भएका बिरामी तथा उनीहरूको मुटुमा जडित उपकरणमा हालसम्म भाइरसको असर नपर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, कोरोना भाइरसले पैदा गर्ने ‘साइटोकिन्स’ रसायनले फोक्सोमा जति असर गर्छ, त्यति नै मुटु र मुटुका आर्टरीमा रोकावट ल्याउन तथा ‘हार्ट अट्याक’ गराउने सम्भावना पनि रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘साइटोकिन्स’ रसायन रगतमा सजिलै मिसिन सक्छ, जसले रक्तचापलाई सुस्त बनाउँछ, जसको सीधा असर मुटुको धड्कनमा पर्छ ।
मुटु विशेषज्ञबीच भइरहेको अर्को बहस हो, ‘एन्जिओटेन्सिन’लगायत उच्च रक्तचापको उपचारमा प्रयोग भइरहेका औषधि । त्यस्ता औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीमा कोरोना संक्रमण भएमा भाइरसको असर शरीरमा फैलिन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । त्यसैले सावधानी अपनाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको सल्लाह छ ।
तस्बिर ः डेलिमेल डटकोडटयुकेबाट